Calaamadaha digniinta ah ee Botnet Malware
Xatooyada ama qalabka kombiyuutarada ee xaasidnimada ah waxay ku jireen qiyaastii 40 sano, laakiin adeegsigooda si ay u abuuraan wax loo abaabulay ayaa ogaaday ogeysiiskayaga markii boorsooyinka la soo bandhigay ilaa toban sano ka hor. Boorsooyinka ayaa mas'uul ka ah dhacdooyinka ammaanka qaaliga ah ee ku jira internetka waxana ay qaadeen tiro badan oo kombiyuutar iyo kuwo mobile ah. Bil kasta, tiro badan oo kombiyuutar ah ayaa qaba infekshannada botnets, kuwaas oo u muuqda inay xidhaan qalabkan hoos - repositorios no.
Artem Abgarian, waa khabiir ku takhasusay Semt , wuxuu sharxayaa qodobka ay ka kooban tahay qalabka khatarta ah ee botnet, sida uu u faafo ugana shaqeeyo
Ereyga "botnet" wuxuu ka kooban yahay laba erey oo kala duwan, net, iyo boorso. Botnet waa koox ka mid ah kombiyuutarada cudurka qaba oo qabta hawlo kala duwan sida amarrada ama dalabka botmasters. Kumbiyuutar kasta oo labaad wuxuu u egtahay inuu noqonayo botnet waa tallaabooyinka aan la qaadin, oo aadan ku rakibin software anti-naceyb ah. Botnets waa kooxo iyo ururin badan oo nidaamyo ah oo isku xiran iyada oo loo marayo shabakad dhexe ama nidaam hawlgal. Dadka ka shaqeynaya ama qoraya nacasnimadu ma geli karaan dhamaan qalabyada, hase yeeshee waxay hubin karaan tallaabooyinkooda
Sidee loo ogaan karaa haddii kombuyuutarkaygu ka mid yahay botnet?
Waa sahlan tahay in la ogaado haddii kombuyuutarku qayb ka yahay botnet oo aad sidoo kale qiimeyn kartid saameynta uu ku leeyahay waxqabadka qalabkaaga. Marka kombuyuutarradu noqdaan qayb ka mid ah botnet, waxay u shaqeeyaan si tartiib ah oo ha u dhaqmin sida ku qoran amarradaada..Intaa waxaa dheer, website-yadu si sax ah uma soo degi karaan, nidaamyadaada hawl-galladuna aad ayey uga badan yihiin su'aalo. Habdhaqanka noocan oo kale ah ayaa loo arki karaa dadka isticmaala si ay u ogaadaan in botnets ay joogaan. Waxaa laga yaabaa inay kuu sheegi karaan ama aysan kuu sheegi karin wax ku saabsan joogitaankooda sababtoo ah botnets sida caadiga ah waxay u shaqeeyaan si aamusnaan ah
Sidee bay botnets u shaqeeyaan?
Sida aan hore u sharaxnay, botnets waxaa lagu faray in ay qabtaan hawlo gaar ah. Waxay badanaaba mas'uul ka yihiin inay xadaan macluumaadka shakhsiyeed sida faahfaahinta kaararka deynta oo laga yaabo inaanay muuqan dadka isticmaala sababta oo ah anshaxooda aamusnaanta. Boorsooyinka waxaa inta badan isticmaalaan jilayaal xun, oo loo yaqaan botmasters. Amarrada iyo maamulayaasha xakamaynta waxaa loola jeedaa inay soo dejiyaan botnets.
Halista ganacsadaha iyo kuwa isticmaala guryaha:
Khatarta la xidhiidha botnets waxay la mid tahay halista barnaamijyada xaasidnimada ah iyo waxqabadyada laga shakiyo internetka. Tusaale ahaan, botnets waxaa loogu talagalay inay xadaan macluumaadkaaga shakhsiyeed iyo helitaanka faahfaahinta kaarka deynta. Waxay sidoo kale helayaan fursadahaaga fikradahaaga, qorshayaasha, iyo lambarka sirta ah, mararka qaarna waxay kugu qasbaan inaad gujiso xiriirkooda bogagga shabakadda. Waa inaad fahamtaa marka kumbuyuutarkaagu uu ku dhaco, ma sii wadi doono shuruudahaaga laakiin wuxuu qaban doonaa shaqooyinka uu qoondeeyey hacker
Khadka u dhaxeeya kombiyuutarada shirkadaha iyo shakhsiyaadka waa buluug. Dhamaanteena waxaan noqon karnaa dhibbanaha khayaanada botnet, iyo sida kaliya ee looga takhalusi karo waxay ku xiran tahay barnaamijyada ladagaallanka khayaanada. Tijaabinta iyo joojinta khatarta macmiilka botnet waa dhammaantiis waxaad u baahan tahay si loo hubiyo badbaadadaada internetka. Laga soo bilaabo dhinaca farsamada, botnets waa la joojin karaa barnaamijyada anti-naceyb ama barnaamijyada antivirus. Waxaan joojin karnaa infekshannada ku jira taraafikada shabakada waxayna si dhakhso ah uga takhalusi karaan